Amazon Prime သုံးစွဲသူများသည် Audible ကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် eReaders အားလုံး
Joaquín Garcia က | | Amazon Kindle, NOTICIAS
ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများတွင်ပြောရန်မလိုပါ အဆိုပါ ebook ကိုထက်ပိုမိုအောင်မြင်သောဖြစ်လာဖို့အော်ဒီယိုစာအုပ်သည်အဆကြီးထွားလာသည် ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်ကိုယ်တိုင်က။ ကုမ္ပဏီများသည်ဤအခြေအနေနှင့်သူစိမ်းမဟုတ်၊ Amazon ကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။
ဘီဇို့စ်ကုမ္ပဏီသည်ဤအားသာချက်ကိုအသုံးချပြီး၎င်း၏ Audible ၀ န်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးရုံသာမကလူသိများသော Amazon Prime ကဲ့သို့သောအခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လည်းပေါင်းစပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်မကြာသေးမီကကြေညာခဲ့သည် အမေဇုံချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအတွက် Audible ၏ရရှိမှု.
သုံးလကြာ Audible အခမဲ့ကြိုးစားပါ ငါတို့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အချစ်အကြောင်း
Audible သည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးမဟုတ်သော်လည်း Amazon Prime ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်
ဤကမ်းလှမ်းချက်သည် Amazon ၀ န်ဆောင်မှုသို့အမေဇုံဖောက်သည်များအားဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်၊ သို့သော် Audible ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုမပေးသော်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်များနှစ်ဆရှိလိမ့်မည်။ ပိုပြီးအတိအကျဖြစ်ရန် သငျသညျကွားနိုငျလိုင်းများခံစားနိုင်ပါတယ်အသုံးပြုသူသည် audiotexts အပိုင်းအစများ၊ ဂန္ထဝင်အော်ဒီယိုစာအုပ်များ၊ အရေးအကြီးဆုံးသတင်းစာများမှဆောင်းပါးများ၏စတူဒီယိုများစသည်တို့ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ … အကယ်၍ သင်သည် Audible ၏ဖောက်သည်များဖြစ်လျှင်သင်ဘာမှမဆုံးရှုံးပါ။ Amazon Prime သုံးစွဲသူများသည် Audible ၀ န်ဆောင်မှုအတွင်းရှိ Audible အသုံးပြုသူများထက် ပို၍ အခွင့်အရေးများမရှိပါ.
အမှန်တရားကတော့ Amazon ကကျွန်တော်တို့ကို Amazon Prime ကိုကမ်းလှမ်းဖို့တောင်းဆိုပေမယ့် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာနဲ့ဖြည့်စွက်ထားတာကြောင့် Amazon Prime ရဲ့အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာတယ်။ လောလောဆယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး အမေဇုံချုပ်အသင်း ၀ င်များသည်အခမဲ့ရေကြောင်းခရီးစဉ်ကိုနှစ်သက် ၎င်းတို့သည်အခမဲ့ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်များ၊ ebook နမူနာများနှင့်ယခုတွင်အသံသွင်းစက်များနားထောင်ရန်စွမ်းရည်ကိုခံစားနိုင်သည်။ အားလုံးတူညီတဲ့စျေးနှုန်း, $ 99 တစ်နှစ်, သင်ဂီတကိုနားထောင်သို့မဟုတ်အမေဇုံမှတဆင့်ဝယ်ယူတွေအများကြီးလုပ်လျှင်, အမြတ်အစွန်းစျေးနှုန်း။
ယခုမှာသင်သည်သင်မြှင့်တင်ရေး၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်3လကြာ Audible အခမဲ့ကြိုးစားပါ။ မဆိုးဘူးဟမ်?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Amazon Prime သုံးစွဲသူများသည် Audible ကိုအခမဲ့ ၀ င်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သည်